काेराेना संक्रमण: सावधान ! बढ्दो छ सङ्क्रमणको गति – Dcnepal
काेराेना संक्रमण: सावधान ! बढ्दो छ सङ्क्रमणको गति
प्रकाशित : २०७७ जेठ १७ गते १९:१९
काठमाडाैं। विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोभिड–१९ सङ्क्रमणको गति मुलुकमा क्रमशः बढ्दै गएको छ। सङ्क्रमण दर बढेसँग जोखिमको चुनौती पनि उत्तिकै छ। कूल एक हजार ४०१ सङ्क्रमितमध्ये पछिल्लो एक सातामा मात्रै ८०४ जनामा रोग देखियो। जेठ १४ पछि चार दिनमा दैनिक सय भन्दामाथि सङ्क्रमित भेटिए। उक्त चार दिनमा मात्रै ६२९ संक्रमित फेला परे। शुक्रबार १७० जनामा देखिएको कोभिड–१९ उन्नाइसले बढेर शनिबार सबैभन्दा बढी १८९ जनामा देखियो।
गत माघदेखि शुरु भएको सङ्क्रमण चैतमा फाट्टफुट्ट थियो। वैशाखको अन्तिमबाट बढ्न थालेको सङ्क्रमण जेठको दोस्रो सातापछि ह्वात्तै देखियो। पछिल्लो जेठ १२ पछि भने सङ्क्रमणको गति झन् बढ्दो छ। यही जेठ १६ गते शुक्रबार पाँच महिलासहित १७० जनामा कोभिड–१९ पुष्टि भएको थियो। जेठ १५ गते १५६ जनामा सङ्क्रमण देखिएको थियो। जेठ १४ गते ११४ फेला परे । जेठ १३ मा ८४, १२ गते ७२, ११ गते १९ तथा १० गते ३२ जना सङ्क्रमित भेटिएका थिए।
मन्त्रालयले दिएको विवरणअनुसार आजसम्म कोभिड–१९ का कारण छ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। अन्य मुलुकभन्दा नेपालमा मृत्युदर न्यून छ। मृतकको नजिक रहेका व्यक्तिको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम भइरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा विकास देवकोटाले बताए।
चीनको उहानबाट आएका एक नेपालीमा विसं २०७६ माघ ९ मा कोभिड– १९ पुष्टि भएको थियो। चीनबाट आएपछि उनी पुस १६ मा चिकित्सकको सम्पर्कमा गएकामा पुस २८ गते भर्ना भएका थि । माघ ९ गते उक्त भाइरस रहेको पुष्टि गरिएको थियो। पुष्टि गर्न विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनको हङ्कङस्थित प्रयोगशालामा परीक्षण गराउनुपरेको थियो। तर अहिले नेपालका २० भन्दाबढी स्थानबाट यसको परीक्षण हुँदै आएको छ।
त्यसपछि फागुनमा नदेखिएको सङ्क्रमण चैतमा मात्रै फेला परेको थियो। फ्रान्सबाट कतारको दोहो हुँदै नेपाल आएकी युवतीमा चैत १० मा दोस्रो कोभिड–१९ पुष्टि भएको थियो। युवती चैत ४ गते नेपाल आउनुभएको थियो । चैत १२ गते तेस्रो व्यक्तिमा देखिएको सङ्क्रमण अहिले दैनिकरुपमा बढ्दो छ।
पहिलोपटक चीनको उहानमा सन् २०१९ को डिसेम्बर ३१ मा कोभिड–१९ मानिसमा लागेको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि युरोप हुँदै अमेरिकामा फैलिएको रोग भारतपछि भने नेपालमा बढ्दो छ। सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि मुलुकमा चैत १० बाट हवाई उडान बन्द गरिए पनि भारतीय खुला सीमाका कारण सङ्क्रमित व्यक्ति सहजरुपमा नेपाल भित्रिँदा कोभिड–१९ सङ्क्रमण फैलिनमा सहयोग गरेको विज्ञहरु बताउँछन्।
सरकारले परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाएकाले पनि सङ्क्रमणदरको सङ्ख्या बढोत्तरी देखिएको प्रवक्ता डा देवकोटा बताउँछन्। तर विगतमा भन्दा विस्तारै सङ्क्रमण फैलिनेक्रम भने बढ्दो गतिमा छ।
मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक शुक्रबारसम्मको अभिलेखअनुसार मुलुकका ४७ जिल्लामा सङ्क्रमण देखिएको छ । सबैभन्दा बढी २१–३० वर्ष उमेर समूहमा ४४९ व्यक्ति सङ्क्रमणबाट प्रभावित छन्।
यस्तै ११–२० वर्ष उमेर समूहका २५४ तथा ३१–४० वर्ष उमेर समूहका २८७ जना सङ्क्रमित भएका पाइएको छ । दश वर्ष उमेरभन्दा कमका ३७ जना तथा ७१ वर्षमाथिका छ जना बिरामी भेटिएका छन् । असी वर्षमाथिको भने एक जना छन्। बिरामीको अस्पताल बसाइ औसत १८ दिन रहेको छ । सरकार अझै परीक्षणको दायरा बढाउँदै सङ्क्रमण रोक्न एकत्रित भएर लागेको छ।
सङ्क्रमणको जोखिम बढेपछि सरकारले चैत १० गते नै अन्तरराष्ट्रिय उडान बन्द गरेको थियो भने चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा बन्दाबन्दीको आदेश जारी गरिएको थियो। बन्दाबन्दी यही वैशाख २० सम्म जारी छ । अझै बन्दाबन्दी लम्ब्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको चिकित्सकको राय छ। बन्दाबन्दीको मोडालिटीमा परिवर्तन गर्ने विषय अहिले बहसमा उठेको छ।
नेपालमा हालसम्म पिसिआर ६६ हजार ७२९ जनाको र एक लाख सात हजार ५५ जनाको आरडिटीबाट परीक्षण गरिएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा चार हजार बढीको परीक्षण भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आज मात्रै नयाँ सङ्क्रमित १८९ जना छन् । हालसम्म कूल एक हजार ४०१ पुगेकामा २१९ जना निको भएर घर फर्किएका छन्। रासस